जीवन मंगोल - नेपालको झण्डाले मुलबासी मंगोलको अस्तित्व र ईतिहास मेटाएको छ । - MONGOL KHABAR
जीवन मंगोल - नेपालको झण्डाले मुलबासी मंगोलको अस्तित्व र ईतिहास मेटाएको छ ।
जीवन मंगोल / सच्चा इमान्दार इतिहासकारको अभावले नेपालको वास्तविक इतिहास पढ्न र सुन्न पाइँदैन । एकाध विद्वानहरुले खोज गरेको भए तापनि उचित तरिकाले प्रचार प्रसारमा राज्यका सामन्तीहरुले प्रतिवन्ध लगाएर न्यायिक वर्जित गरेको हुँदा साँचो इतिहासको सट्टा राजा–महाराजाहरुको गुनगानले भरिएका मोटा मोटा इतिहास पढाइन्छ, पढिन्छ र त्यसैलाई आधार मानी विश्लेषण गरिने हुँदा नेपालको सत्य इतिहास डोकोले छोपे जस्तै छोपिएको छ ।
कांग्रेसभित्र खतरनाक रणनीतिः ओली सरकार ढाल्ने तर…
भारतीय इतिहासको कुनै कालखण्डमा सामन्ती राजाहरुले प्रयोग गरेको धार्मिक प्रयोजनका निम्ति स्थापना भएको कुनै पनि व्यवस्था वा नीति नेपालमा लाद्दा के त्यो राष्ट्रियता झल्किन्छ ? वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कहाँबाट र कसको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्माण गरियो ? यी तथ्यलाई जान्न आवश्यक छ । नेपालका राष्ट्रवादी भन्नेहरुले यो आयातित कथित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विश्वकै फरक र नमूनाको रुपमा प्रचार गरेको पाइन्छ । साँच्चै यो देशको राष्ट्र झण्डा यही माटोले कल्पना गरेको हो ? अवश्य पनि होइन ।
नेपालको हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरुलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डा हो । यसभित्र मंगोलहरुको अस्तित्व मेटिएको छ । त्यसैकारण नयाँ झण्डाको परिकल्पना गरी प्रस्ताव समेत मंगोल नेशलन अर्गनाइजेशनले पेश गरिसकेको एक दशक हुन लागिसकेको छ । वास्तवमा यो आवाजलाई अन्य साना दलहरुले पनि समर्थन गरेको पाइन्छ । कतिपयले जलाउने समेत धम्की दिएको भए तापनि खासै साहस देखाएको भने पाइँदैन । यसरी राजनीतिक तवरले गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ । तर पनि यथार्थ बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।
अहिले प्रचलित राष्ट्र झण्डा १६ डिसेम्बर १९६२ देखि आधिकारिक रुपमा कायम गरिएको हो । सन् १९६२ भन्दा अघिको झण्डामा केही परिमार्जन गरी ल्याइएको झण्डा कस्तो थियो भन्ने सवालमा अहिले जस्तै चन्द्रसूर्य नै थियो । त्यसको परिमार्जित रुप चन्द्र सूर्यमा नाक, कान, आँखा, टुप्पी धरी समेत रहेको मानव आकृति देखिन्थ्यो । यस्तो झण्डा सन् १९६१ सम्म कायम रहेको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहका पूर्खाहरु वर्तमान भारतका राजपूतहरुको वंशावली अनुसार चन्द्रवंशी सूर्यवंशी र अग्निवंशी एउटै समुदायमा पर्ने उल्लेख छ । कथित हिन्दू ग्रन्थले पनि चन्द्र र सूर्यको प्रसंग जोडेको प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ । पहिलेका शाह राणाहरु आफूलाई चन्द्र र सूर्र्यका सन्तान मानेका छन् ।
यसै आधारमा हालको झण्डामा चन्द्र सूर्य अंकित गरिएको हुन सक्ने विद्वानहरुको तर्क रहेको छ । अझ त्यसबेला “हनुमानध्वज, गरुडध्वज” भनेर आफूलाई चिनाउँथे । भारतका राजपूतहरुले पनि हनुमानध्वज, गरुडध्वज मान्दछ । र पृथ्वीराज चौहानको झण्डा समेत माथिबाट हनुमान र तल सूर्यमा ओम अंकित झण्डा फहराएका थिए । उनै पृथ्वीराज चौहनको झण्डा पृथ्वीनारायण शाहले हनुमानको ठाउँमा चन्द्र राखी नेपालको झण्डाको रुपमा फहराउन थालेको हो भन्न सकिन्छ । यस कुरामा विश्वास नलागेको खण्डमा वर्तमान भारतकै अजयगढ राज्यको झण्डा हेर्न सकिन्छ । जुन पृथ्वीनारायण शाहकै खलकले त्यसको निरन्तरता दिएको पाइन्छ । नेपालको प्रचलित राष्ट्र झण्डा र अजयगढ राज्यको झण्डामा खासै भिन्नता छैन । दुई चुच्चोका माथिल्लो भागमा नेपालको झण्डामा चन्द्र अंकित रहेको छ भने अजयगढ राज्यको झण्डाको माथिल्लो भागमा चन्द्र नभएकोले मात्र फरक देखिन्छ । तर, तल्लो चुच्चोमै चन्द्र, सूर्य अंकित गरिएको छ । यो परिमार्जित रुप हो । पहिला हनुमान माथि र सूर्य तल थियो । सन् १९४८ पछि परिमार्जन भएको झण्डा पहिले १८७७ देखि अजयगढमा आधिकारिक लागू गरेको पाइन्छ ।
ओली सरकार टिकाउने पक्षमा को को ?
भारत वर्षमा मोहम्मद गजनीले भारतवर्षभरि आफ्नो अधिकार स्थापित नगरे पनि हिन्दूहरुलाई मार्न उनीहरुको धनसम्पत्ति नष्ट गर्न थालेपछि त्यहाँका हिन्दूहरु माग्ने भएका थिए । सन् ११७३ मा गौरका सन्तान मोहम्मद गोरीले गजनी विजय गरे । उनले पनि ११७५ देखि मोहम्मद गजनी जस्तै भारतमा आक्रमण गर्न थाले । त्यस समय राजपूतहरुको प्रधान्य रहेको थियो र अजमेर र दिल्लीका चौहान राजा पृथ्वीराजको योजनामा हिन्दूहरुले संगठन गरी ११९१ मा गोरीसँग युद्ध लडेका थिए । त्यत्तिबेला त्यस झण्डामा माथिल्लो चुच्चोमा हनुमान र तल्लो चुच्चोमा सूर्यमा ओम लेखिने झण्डा फहराउने गरेका थिए । त्यत्तिबेला गजनीलाई पृथ्वीराजले हराएका थिए । तर त्यसको २ वर्षपछि उल्टै पृथ्वीराज चौहानको बध गरेका थिए – गोरी शासकले । पछि बख्तियार खिल्जीले कब्जा गर्दै गएपछि भागेर वर्तमान नेपालको पश्चिमी भेगमा जिउँ ज्यान बचाउन आएको सन्तान नै द्रव्य शाह, पृथ्वीनारायण शाहहरु हुन् । यिनीहरु भारध्वज गोत्रका थिए । भारध्वज गोत्र राजपूतहरुमा हुन्छ । र यिनीहरु पृथ्वीराज चौहानकै सन्तान हुन् । त्यसै भएकोले हालको २ चुच्चो चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा आफ्नो गौरवको रुपमा खडा गरेका हुन् भन्न सकिन्छ ।
हुन त अनेक तर्कनाहरु हुने गरेका छन् । चन्द्र सूर्यको आफ्नै शैलीमा परिभाषित गरेको भए तापनि त्यसको उत्पत्ति कुन प्रयोजन र किन भयो ? यही कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ यो झण्डा हिन्दुवादी संरक्षण गर्नका निम्ति स्थापित भएका कारण यस भित्र मंगोलहरुको अस्तित्व इतिहास र संस्कृति अटेको पाइँदैन । भारतीय राजा महाराजालाई प्रतिनिधित्व गरेको यस झण्डा खारेज हुनु नै उपयुक्त देखिन्छ । यसप्रति राष्ट्रवादी चिन्तकहरुले मनन गर्ने हो कि !